सुन्दरी प्रतियोगिता : बुद्धि होइन क्रिम र मेकअपको प्रतिस्पर्धा « Sansar News
सुन्दरी प्रतियोगिता : बुद्धि होइन क्रिम र मेकअपको प्रतिस्पर्धा
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १२:२९
पछिल्ला केही दिनयता आठ वर्ष अगाडि आयोजित मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल ब्युटि–पेजेन्टमा भाग लिएकी एक किशोरीलाई सञ्चालक मनोज पाण्डे नामका व्यक्तिले बलात्कार गरेको किशोरीको आरोपसहितको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसले नेपाली समाजमा नयाँ तरंग उत्पन्न गराएको छ । यसले सौन्दर्य तथा मनोरन्जनका क्षेत्रभित्र हुनेयौन शोषणलगायतका अन्य शोषणका विरुद्ध आवाज उठाउन तथा बलात्कृत भएका बालिका तथा किशोरीको न्यायका लागि कानुन परिमार्जन गर्ने सम्मका विषयहरु बाहिर आएका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर डा.अरुणा उप्रेती सुन्दरी प्रतियोगिताबारे नेपाल मात्र नभएर विदेशमा समेत किशोरीमाथि हुने शोषण र सौन्दर्य सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले आफ्ना सामग्रीको बजार विस्तारका लागि सौन्दर्य प्रतियोगिताको बाटो अपनाउने गरेको बताउँछिन् । विश्वभरी हुने सुन्दरी प्रतियोगितामा बुद्धिको प्रतिस्पर्धा नभएर शल्यक्रिया, क्रिम, मेकअप, लुगा आदिले निर्णय गरिने उनकाे भनाइ छ ।
बुद्धि होइन क्रिम र मेकअपको प्रतिस्पर्धा
सौन्दर्य प्रसाधनको कुरै नगरौं, यस्ता कम्पनीले कुन देशमा महिलालाई आफ्नो कम्पनीको मालसामान किन्न लगाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर हेरिरहेका हुन्छन् । व्यापारीको धर्म नै कसरी हुन्छ व्यापार गर्नु र मुनाफा कमाउनुमा हुन्छ । सौन्दर्यको विषयमा, अनैतिक हुने भएन । तर, मैले समस्या चाहिँ तब देख्छु जब यस्ता सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनीले मानवीय मूल्य, मानवीय सौन्दर्य चेतना आदि सबै महिलाको आँखा, नाक, दाँत, वक्ष र कम्मरमा हुन्छ भन्ने भावना जागृत गराइदिन्छन् । अनि बुद्धिजीवी भन्ने मजस्ता पनि त्यसको फन्दामा पर्छौं । सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदा कुनै देशका गाउँघरका, काम गरेर पसिना निकाल्ने, हातमा ठेला परेका, भारी बोकेर उकाली ओराली गर्ने युवती मञ्चमा उभिँदैनन् । उनीहरूसँग न पैसा हुन्छ, न त सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनीले देख्ने अनुहार र शरीरको सौन्दर्य ।
पहिला पहिला पढिन्थ्यो, ‘संसारमा सबभन्दा बढी सुन्दरी उत्पादन गर्ने देश हो भेनेजुएला ।’ संसारमा सबभन्दा बढी तेल भण्डारण भएको भेनेजुएलामा युवतीहरूलाई सानैदेखि सुन्दरी हुन प्रेरित गरिन्थ्यो । पर्याप्त मात्रामा पैसा भएकाले सायद त्यहाँको समाज र परिवारले आफ्ना छोरीहरूलाई सौन्दर्य प्रसाधन दिन समस्या भोग्नुपर्दैनथ्यो । र, युवतीहरूको सपना नै सुन्दर बनेर ‘विश्व सुन्दरी’ को ताज पहिरने हुन्थ्यो । तर, यसका लागि त्यहाँका युवतीहरूले कस्तो बलिदान गर्नुपथ्र्यो भन्ने विचार ‘सौन्दर्य’ हेर्ने मानिसले थाहा पाउन सक्दैन । त्यहाँ १२ वर्षे बालिकाको नाक, पुठ्ठाको शल्यक्रिया गरेर सौन्दर्य बढाउन मातापिता सहजै स्विकार्थे । १६ वर्षमा वक्षस्थलको शल्यक्रिया गरेर ठूलो देखाइने चलन पनि रहेछ । दाँतलाई मिलाउने त सहज कामै हो । तर, मातापिताले ९ वर्षीया बालिकालाई ‘हर्मोन’ सुई दिएर ठूलो बनाउने काम गरिन्थ्यो भन्ने पढेपछि चाहिँ लाग्यो, सौन्दर्यका लागि अलि बढी नै ‘बलिदान’ दिनुपर्ने रहेछ । ९ वर्षमा त्यस्तो हर्मोन दिएपछि ती बालिकाको शरीरमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर त्यहाँको समाजले किन नसोचेको ? ‘सुन्दरता’ भएपछि ‘स्वास्थ्य’ बारे के वास्ता भनिएको होला सायद ।
‘सुन्दरी प्रतियोगिता’ मा बुद्धिको प्रतिस्पर्धा हुँदैन । शल्यक्रिया, क्रिम, मेकअप, लुगा आदिले निर्णय गरिन्छ । सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनीलाई कुन देशमा आफ्नो व्यापार फैलाउनु छ, त्यहाँका महिलालाई ‘सौन्दर्यप्रति जागरुक गराएर त्यहीँका महिलालाई ‘विश्व सुन्दरी’, ‘ब्रह्माण्ड सुन्दरी’ बनाइन्छ । भारत, चीन, थाइल्यान्डमा पनि कम्पनीहरूले ‘विश्व सुन्दरी’ र ‘ब्रह्माण्ड सुन्दरी’ बनाइदिए । अब ती ठाउँका महिलाले धेरै प्रसाधन प्रयोग गर्छन् ।
भारतमा पहिले पहिले मिस इन्डियालाई ‘तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘समाज सेवा’ भन्थे । ‘मदर टेरेसा’ मन पर्छ भन्थे । तर, पछि कुनै पनि भारतीय ‘विश्व सुन्दरी’, ‘ब्रह्माण्ड सुन्दरी’ले ‘समाज सेवा’ गर्छु भनेको बाचा सम्झेनन् ।
“कर्णालीमा मिस नेपालको अडिसन” मा त्यहीँ बसेका महिला र युवतिले मात्र भाग लिने कि ठुला शहरमा बसेर स्कुल पढेकाहरुले पनि भाग लिन पाउने ? यो प्रतियोगिता ट्यालेन्सी, एक्स्पोजर र शिक्षा प्रस्तुत गर्ने इभेन्ट मात्र हो, ‘यसले जस्तोसुकै अप्ठ्यारोलाई पनि ट्याकल गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ ।’ कर्णालीको विविधता प्रवर्द्धनका लागि यस्ता कार्यक्रम सहयोगी हुने रे । कर्णाली कसरी पढ्ने/लेख्नेको प्रतियोगिता हुन्न, त्यहाँ प्रतियोगिता हुन्छ त किरिम र पाउडर लगाएर गोरो बन्ने प्रतियोगिता हुन्छ । प्रश्न मात्र गरेको, के यो नै “नयाँ नेपालको महिला हो ? प्रश्न मात्र गरेका, छाउगोठमा बसेर कर्णालीमा मिस नेपालको अडिसनमा भाग लिने कसले होला ?